फ्रेवुअरी 19, 2019 अक्टोबर 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment क्वान्टम थ्योरी, म्याक्स प्लान्क, विज्ञान तथा प्रविधि
के हो क्वान्टम थ्योरी (Quantum Theory) ? आजको युग विज्ञान तथा प्रविधि युग हो । विज्ञान तथा प्रविधिमा हरेक दिनजसो नयाँ नयाँ आविष्कार हुनु नौलो कुरा रहेन किनकि सूचना प्रविधिको विकासका कारण पनि नयाँ आविष्कारको विकास विश्वभर फैलन रत्तिभर पनि लाग्दैन । भौतिकशास्त्रको क्वान्टम सिद्धान्तमा आधारित भई विकास गरिएको क्वान्टम कम्प्युटिङ मेसिनले अहिले विश्वभर उपलब्ध प्रविधि क्षेत्रका सुपर कम्प्युटरको तुलनामा २४ हजार गुणाले तीव्र गतिमा काम गर्छ । विश्वभरबाट नयाँ तथ्य आउँछन्, जसले अनुसन्धानको नतिजा समयभन्दा छिटो पनि आउन सक्छन् । यस्तै अनुसन्धानको विषय हो, सूचना प्रविधि क्षेत्रको र यो क्षेत्रमा हालसम्मकै ठुलो उपलब्धि हात लागेको छ । जसको नाम हो ‘क्यान्टम कम्प्युटिङ’ ।
क्वान्टम थ्योरी (सिद्धान्त) आधुनिक भौतिकी (फिजिक्स) मा आधारित सिद्धान्त हो । यसले प्रकृति एवं वस्तुको व्यवहार र आणविक तथा उपआणविक तहमा ऊर्जाको विषयमा व्याख्या गर्छ । प्रकृति एवं वस्तुको व्यवहार र ऊर्जालाई त्यो तहमा कहिलेकाहीँ क्वान्टम भौतिक र क्वान्टिम मेक्यानिक्सको रूपमा बुझिने गरिन्छ । सन् १९०० मा भौतिकशास्त्री म्याक्स प्लान्कले जर्मन फिजिकल सोसाइटीमा आफ्नो क्वान्टम सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए । प्लान्कले कुनै चम्किलो वस्तु रातोबाट सुन्तले रङ्गमा कसरी विकिरण भएर (रेडिएसन) भएर जान्छ र अन्तमा नीलोमा भएर जान्छ, जतिखेर तापक्रम बढ्छ, त्यसको कारण पत्ता लगाउन खोजेका थिए ।
ऊर्जा हरेक एकाइहरूमा अवस्थित रहन्छ जसरी वस्तुले काम गर्छ भन्ने प्रस्थापना राख्दै उनले पत्ता लगाए । यो प्रस्थापना अघि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्ग एक अचर हुन्छ भन्ने प्रस्थापना थियो । आफ्नो प्रश्नको खोजीका लागि उनले गरेको प्रयत्न गरे । यी एकाईहरूको अस्तित्वलाई पहिलो क्वान्टम थ्योरीको प्रस्थापनाको रूपमा बुझियो ।
← जनमत सर्वेक्षण – पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट’ गीतको शब्दमा गल्ती थियो वा थिएन तपाई के भन्नुहुन्छ ?
ब्रोकाउली र यसको उपयोगिता →
One thought on “के हो क्वान्टम थ्योरी (Quantum Theory) ?”